Hosting Web tsara indrindra (2020)
Afeno ny IP-nao Arovy ny adiresy IP anao amin'ny scammers.
Web Comparison HostAmpitahao ny tranonkala 3 indray mandeha.
Fidio ny mpampiantrano tsaraMakà torohevitra momba ny mpampiantrano tranonkala manokana.
Home » Ny fampiantranoana tranonkala tsara indrindra amin'ny 2020 (Miorina amin'ny tena data & ny fampiasana tranga)
Ny fampiantranoana tranonkala tsara indrindra amin'ny 2020 (Miorina amin'ny tena data & ny fampiasana tranga)
Article by Jerry Low. .
Nohavaozina: Jul 23, 2020
Satria ny tranonkala samihafa dia manana filana samihafa - Izay tsara indrindra ho ahy dia mety tsy mety aminao. Pejy fampidirana ao amin'ny 5 - 20 mpizara tranonkala tsara indrindra dia mety ilaina ho an'ireo izay manangona lisitra fiantsenana; Ireo mpivarotra lehibe izay mila mividy tranonkala ASAP dia mila antsipiriany bebe kokoa.
From ny lisitry ny lisitry ny hevitra momba ny fampiantranoana, Nifidy orinasa 10 tsara indrindra amin'ny fampiantranoana tranonkala:
Hodinihintsika tsirairay avy izy ireo ary hampitahainay ireo tranga samihafa anaovan'ity pejy ity.
Orinasa mpampiantrano tranonkala 10 tsara indrindra: Pros-vs-Cons & Verdict
Ny orinasa tompona fandraharahana LA izay napetraka ao amin'ny 2001. Manokana ary mitantana ny Web Hosting Hub.
fandefasana: $ 4.99 / mo
Key endri-javatra: Domains malalaka, fitahirizana tsy voafetra, e-mail hosting, Auto-SSL, tranonkala fananganana tranokala, 90 andro andro antoka antoka antoka.
24 × 7 live chat sy telefona fanohanana.
Fikirana malalaka tranokala ho an'ny mpanjifa vaovao.
50% fihenam-bidy (ekena) rehefa mandefa amin'ny alalan'ny rohy promo.
Ny fampiantranoana ny vidin-tsolika dia mitombo taorian'ny sazy voalohany.
Tsy misy fidirana an-tserasera mivantana - fanamarinana an-tariby.
Tsidiho ny InMotion
Ny InMotion Hosting dia natsangan'i Sunil Saxena sy Todd Robinson tao amin'ny 2001. Ny orinasa dia mihazona birao telo any Los Angeles, CA, Virginie Beach, VA ary Denver CO, miaraka amin'ireo foibe data any Los Angeles, CA ary Ashburn, VA.
Manana sy mitantana ny Web Hosting Hub izy ireo ary mampiasa ny 300 mpiasa amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao.
InMotion Hosting dia mpampiantrano tranonkala izay azoko antoka handiavana ahy - Ny tetik'asa vaovao nataoko HostScore dia miankina amin'ny InMotion VPS ary tena faly aho amin'ny fampisehoan'izy ireo.
InMotion Hosting dia tao anatin'ny lalao fampiantranoana efa ho 20 taona izao - ny lozisialy an-tsoratry ny orinasan'izy ireo dia nanaporofo fa iray amin'ireo mpamatsy fampiantranoana tsara indrindra amin'ny tsena.
Misy zavatra vitsivitsy izay miorina ao amin'ny InMotion Hosting dia ny seramika miorina (izay manjary foana> 99.98% uptime) sy ny fanohanany ny mpanjifa. Raha misy olana na fanontanianao, dia mora foana ny manohana azy ireo.
Ny orinasa dia manolotra drafitra fampiantranoana telo mizara izay tsara ho an'ny tranokala lehibe bitika haavo; ary koa ny VPS ary ny fampiantranoana manokana ho an'ny tranokala lehibe kokoa.
Vakio eto ny famerenako InMotion Hosting feno eto
InMotion Lite (manomboka amin'ny $ 2.49 / mo) dia mahafinaritra ho an'ireo vao misolo tena, mpitoraka bilaogy manokana ary freelancer izay mitady vahaolana azo tanterahina.
Ho an'ny eCommerce sy ny tranokala manana fifamoivoizana lehibe kokoa dia manoro hevitra ny InMotion's VPS-1000HA-S (manomboka amin'ny $ 22.99 / mo).
Secaucus, orinasan-trano fampiantranoana NJ, natsangan'i Michael Lavrik sy John Quaglieri tao amin'ny 1999.
VPS drafitra: Manomboka amin'ny $ 6 / mo
Drafitra voatokana: Manomboka amin'ny $ 70 / mo
Key endri-javatra: Fikojakojana tsy voafetra, vidin'ny mari-pamidy miafina ho an'ny fiainana, 100% ao an-trano, fikolokoloana ho an'ny VPS fampiantranoana.
Saram-pandam-baravaran'ny saram-pidirana ho an'ny fampiantranoana ny VPS.
Tranonkala malalaka mifindra monina ho an'ireo mpampiasa voalohany.
Fanohanana ny mpanjifa 100% an-trano.
Olo-trano nivoatra be virus sy scanner malware.
Manandrama fotsiny $ 0.01 ho an'ny volana voalohany (code coupon: WHSRPENNY)
Toerana mpizara any Etazonia ihany.
Tsidiho ny InterServer
Michael Lavrik sy John Quaglieri dia nanangana ny InterServer niverina tao amin'ny 1999 fony izy ireo samy mpianatra amin'ny ambaratonga ambony. Ny fahitan-dry zareo ho an'ny orinasa dia ny hanome tolotra amin'ny vidiny amin'ny vidiny lafo nefa mbola mitazona asa sy fanohanana.
Ny mpamatsy trano fampiantranoana amin'izao fotoana izao dia manana foibe roa momba ny angona izay hita ao amin'ny Secaucus, NJ ary Los Angeles, CA; ary manolotra serivisy fampiantranoana isan-karazany, toy ny fampiantranoana fampiantranoana, fampiantranoana rahona, ary ireo servisy voatokana, ankoatra ny hafa.
Na dia tsy voatery ho anarana mahazatra eo amin'ny indostrian'ny mpampiantrano aza, ny InterServer dia mahavita manintona ny saintsika rehefa fantatro tsara ny orinasa.
Mazava ho azy, tsy mandratra fa manolotra serivisy fampiantranoana mafy izy ireo amin'ny fifanarahana lehibe sy ny fahafaha-manavao ny drafitrao amin'ny VPS ary ny fampiantranoana manokana rehefa manomboka mitombo ny tranokalanao.
Ny tena tsy manam-paharoa amin'ny InterServer dia ny fanomezan-dry zareo ny hanome drafitra fampiantranoana azo tanterahina ho an'ny mpanjifany. Ny drafi-piarahan'izy ireo iray ihany no hany ao amin'ity lisitra ity izay manolotra vidiana mihidy rehefa misoratra anarana ianao, izay mijanona ankehitriny amin'ny $ 4 / volana, FOREVER, raha misoratra anarana mandritra ny 3 taona.
Vakio eto ny fandinihako InterServer lalina
Interserver mizara fampiantranoana dia tsara ho an'ny bilaogera tsirairay sy orinasa kely. Ho an'ny orinasam-pifandraisana lehibe sy tranonkala lehibe misy fifamoivoizana mahery vaika - ireo mpizara VPS sy NJ miompana amin'ny NJ dia manome vahaolana mora tanterahina.
Noforonina tao amin'ny 2004 avy amina vondron'olona sendikan'ny mpianatry ny oniversite. Birao teto Boligaria, Italia, Espaina, Angletera, ary Etazonia.
Key endri-javatra: Caching voatsangana amin'ny tranokala CMS, fampiantranoana mailaka, HTTP / 2 En let, Ndao hampidiro ny wildcard SSL.
Andao hamboarina momba ny Standard & Wildcard SSL.
Serivisy mivantana amin'ny serivisy mivantana amin'ny serivisy (jereo ny fianarako)
Safidin'ny toerana misy ny serivisy amin'ny kaontinanta telo.
HTTP / 2, cacher namboarina, NGINX.
Tsidiho ny SiteGround
SiteGround dia niorina tamin'ny 2004 avy amina namana avy amin'ny anjerimanontolo tao Sofia, Bolgaria. Ankehitriny, ny orinasa dia tarihin'i Tenko Nikolov, Reneta Tsankova, ary Nikolay Todorov.
Ny orinasa dia efa niasa tamin'ny olona 400 niaraka tamin'ireo birao tany Boligaria, Italia, Espana, Royaume-Uni, ary Etazonia. Amin'izao fotoana izao dia manana foibem-pifandraisan'ny 6 lehibe any Etazonia, Holandy, Royaume-Uni, ary any Singapore.
Ny orinasam-piraisan-kery iray hafa, SiteGround dia iray amin'ireo orinasa vitsy izay miezaka hanolotra serivisy fampiantranoana azo antoka miaraka amin'ireo endri-javatra vaovao.
Ny singa iray toy izany dia ny Super Cacher, izay fitaovana enti-manamboatra tranokala afaka mamorona tranokala haingana kokoa. Ny singa iray hafa dia ny fahafahana mametraka ny SSL amin'ny sora-baventy vitsivitsy, ka mahatonga azy io ho mora amin'ny mpampiasa hahazoana antoka ny tranonkala.
Na dia mety hoheverina ho kely fotsiny aza ny fidinany amin'ny fanavaozana, dia mendrika tokoa izany ho an'ny kalitaon'ny fampiantranoana azonao. Mino aho fa mety amin'ny SiteGround ho an'ireo tompona orinasa sy bilaogera matihanina maniry vahaolana vahaolana tsy misy ahiahy.
Jereo ny SiteGround manontolo
Newbies, mpitoraka bilaogy manokana, orinasa kely-antonony, freelancer, orinasam-bola tsy mitady tombony, mpamorona tranonkala, mpampiasa WordPress mandroso, eCommerce, fivarotana an-tserasera ary forum-tranonkala lehibe.
Foibe ao Agoura Hills, Kalifornia; miorina amin'ny 2006.
starterDouble: $ 2.95 / mo
Key endri-javatra: Fampiantranoana maitso 300% (faritry ny indostria), safidin'ny toerana mpizara efatra, endri-javatra hafainganam-pandeha tsara, Ndao Encrypt Wildcard SSL.
Fampisehoana an-tsokosana solosaina - nomanina A tamin'ny fizahana rehetra.
Sariaka ny tontolo iainana - fampiantranoana maitso 300% (topon'ny indostria).
Lohahevitry ny Genetaly maimaim-poana sy ny lohahevitra StudioPress.
Ny fametrahana sy fanavaozana SSL automated.
Ireo tranonkala maimaim-poana mifindra + mora ampiasaina.
Ny saram-pananganana ($ 15) dia tsy averina.
Mihamaro ny vidin'ny fanavaozana.
Tsidiho ny GreenGeeks
Nofantenana tao amin'ny 2006 avy amin'i Trey Gardner, ny orinasa dia nandray soa avy amin'ny traikefa niainany tany amin'ny orinasa maromaro nampiantrano. Androany, Trey sy ny ekipany matihanina matihanina dia nanangana GreenGeeks ho orinasa iray matanjaka, azo antoka ary mifaninana.
Ny fakan'ny orinasa dia mipetraka any Amerika Avaratra ary manompo amin'ny mpanjifa 35,000 ahitana tranonkala 300,000 mihoatra ny XNUMX. Amin'ny maha orinasa mpifindra monina ara-tontolo iainana azy, dia nanolo-tena ny handao ny dingam-pananana azo antoka izy ary hanolo ny angovo ampiasaina miaraka amin'ny fahatelo ny karajian'ny angovo ampiasaina.
GreekGeeks dia kitapo kely mifangaro kitapo misy anay.
Etsy ankilany, ho toy ny fikarohana teknolojia izay mbola manantena ny hanana ny tany (sy ny fiainana eo aminy) manodidina ny fotoana ela kokoa, dia mankasitraka ny fitiavan-tanindrazana aho. Etsy andaniny kosa, dia mijanona kely amin'ny adin-dry zareo ny tetik'adiny iray amin'ny tetik'ady.
Toa tsy misy fifandanjana eo amin'ny lafiny iray ary azoko antoka fa tsy nahazo ny zava-drehetra aho. Na izany aza dia tadidio ihany koa ny fahombiazan'ny servisy GreenGeeks tamin'ny fitsapana nataonay.
Amin'ny maha-olona ahy manokana, tsapako fa ity dia enti-manentana izay mahafinaritra ny zava-drehetra avy amin'ny bilaogy hatrany amin'ny sehatry ny orinasa madinika. Raha ny marina, mieritreritra aho fa toerana tsara ho an'ny mpikamabana ny mampiantrano ny vohikalany, nomena ny trano, ny vidiny ary ny loharanon-kevitra azo.
Ianaro bebe kokoa ao amin'ny famerenam-bokatra GreenGeeks Timoty
Izay mpampiasa mitady vahaolana fampiantranoana am-pirahalahiana, vaovao, mpitoraka bilaogy manokana, orinasa kely haino aman-jery, mpampiasa ny teti-bola, freelancer, ary fikambanana tsy mitady tombony.
2004 naorina, Hostinger dia orinasa mpampiantrano teti-bola miasa amin'ny foibe data marobe manerantany.
Key Features: Domains malalaka, tranokala tranonkala vaovao, tranonkala mora .xyz, mora indrindra fampiantranoana fampiantranoana.
Curl, Jobs Cron, MariaDB sy InnoDB, SSH Access ho an'ny Budget Budget.
Serivisy fifindra-monina maimaimpoana ho an'ny mpanjifa vaovao.
Zyro (mpanamboatra tranonkala mandroso) dia tafiditra ao amin'ireo drafitra rehetra nizara.
Safidin'ny toerana misy serivisy amin'ny toerana valo.
Fanohanana ampaham-potoana amin'ny fametrahana iray amin'ny klioba ho an'ny Single Shared Plan.
Tsidiho ny Hostinger
Amin'izao fotoana izao dia tarihin'ny CEO Arnas Stuopelis, ny Hostinger dia niorina voalohany tao amin'ny 2004 ho toy ny orinasan-tseraseran'ny "Hosting media" ao Kaunas, any Litoania. Taona vitsy taty aoriana, nanangana ihany koa ry 000Webhost, tranonkala fampiantranoana maimaimpoana tsy misy dokam-barotra.
Na dia orinasa fampiantranoam-bola amin'ny banky aza dia manana foibe momba ny angona 8 hita manerana ny globe miaraka amin'i Singapore ny fanampim-baovao farany. Izy ireo ihany koa dia mipetraka any amin'ny firenena 39 ary mpitsara ICANN nahazo mari-pahaizana manokana.
Hatramin'ny nanombohan'izy ireo, Hostinger dia nitombo ho orinasa fampiantranoana fanta-daza izay manam-pikatrohana mpampiasa 29 tapitrisa miaraka amin'ny fampiasana vaovao vaovao 20,000 vaovao isan'andro isaky ny 2017.
Ny fanalahidin'ny fahombiazan'izy ireo? Manolotra tononina fanatobiana avo lenta indrindra amin'ny vidiny ambany amin'ny vidiny mirary (iray amin'ireo sarobidy indrindra amin'ny tsena, jereo ny latabatra) ho an'ireo mpampiasa azy.
Ny Hostinger dia mendrika karama raha te hanana karazana fampiantranoana maro araka izay tratra raha tsy mila mipoitra ny teti-bola.
Fantaro bebe kokoa amin'ny famerenako Hostinger lalina
Newbies, mpamaham-bolongana tsirairay, orinasa madinika-antonony, mpampiasa vola, freelancer ary fikambanana tsy mitady tombony.
Notendrena tany Ann Arbor, Michigan; napetraka tao amin'ny 2001.
Key endri-javatra: Natsangana CMS cacher, SSL maimaim-poana, na inona na inona antoka antoka ny vola.
Tsara kokoa ho an'ny fahombiazan'ny serivera tsara indrindra.
Amin'ny fotoana rehetra azo antoka ny vola.
Safidin'ny toerana misy ny serivisy amin'ny toerana efatra.
Ny drafitra Turbo ihany no manohana ny HTTP / 2.
Ny fanohanana mivantana amin'ny chat dia tsy misy foana.
Tsidiho ny Hosting A2
Notarihan'ny CEO Bryan Muthig, ny A2 Hosting dia niorina tamin'ny 2001 tao Ann Arbor, Michigan ary fantatra tamin'ny anarana hoe Iniquinet tamin'izany fotoana izany.
Nanomboka teo dia nanova ny anarany ny tompon'ny tranonkala fampiantranoana tsy miankina ary nanohy nitàna toerana an'arivony nalaza tamin'ny alalan'ny mpividy, mpanolontsaina, VPS, ary tetik'asa natokana.
A2 Hosting dia efa ela, ary nahavita nijanona ela teo izy ireo tamin'ny alàlan'ny fifantohany tamin'ny zavatra tsara indrindra nataon'izy ireo: izy no mpampiantrano tranonkala haingana indrindra.
Miaraka amin'ny fitaovana fitendry amin'ny tranokala antsoina hoe A2 Optimized Tool, ny tranonkala izay atolotra ao amin'ny A2 Hosting dia mandefa haingana kokoa noho ny maro an'isa. Ambonin'izany, tsy manana fahalalana ara-teknika ianao na manao fampiratiana mpampiantrano hahafahana mamela izany. Miaraka amin'ny endri-javatra sy ny teknolojia toy ny SSD, Railgun Optimizer, ary caching amin'ny pre-configurable ho an'ireo mpanjifa mpizara iombonana, dia manohy manangana ny fenitra ho an'ny haingam-pifanarahana iombonana.
Raha zava-dehibe aminao ny hafainganam-pandehany, dia ilaina tokoa ny manamarina ny fampiantranoana A2.
Vakio ny valin'ny A2 Hosting
Newbies, mpitoraka bilaogy manokana, orinasa kely-antonony, mpampiasa vola, freelancer, orinasam-bola tsy mitady tombony, mpamorona tranonkala, mpampiasa WordPress mandroso, eCommerce, fivarotana an-tserasera ary forum momba ny tranonkala lehibe.
Hita ao amin'ny 2007, ny TMD Hosting dia mameno ny vahaolana fampiantranoana rehetra: Shared, Reseller, VPS Cloud, WordPress Manage ary Dedicated.
Start plan: $ 2.95 / mo
Plantera orinasa: $ 7.95 / mo
Key endri-javatra: Sehatra maimaim-poana, vonona vonona, fitsapana maimaimpoana 60 andro, NGINX, andao hampidirina ny WildCard SSL, code code fihenam-bidy manokana hoe "WHSR7".
Mazava ny torolàlana momba ny fetra mpizara.
Vola indray andro 60 antoka
Big discount ho an'ny mari-pamantarana vaovao
Serivisy fifindra-monina maimaim-poana ho an'ny mpampiasa vaovao.
Tsidiho ny TMD Hosting
Profil amin'ny orinasa
TMD Hosting dia nanodidina ny 10 taona maro ary noheverina ho safidy azo itokisana ho an'ireo sahirana mpamatsy fampiantranoana kalitao.
Miaraka amin'ny ivon-toerana efatra dia miparitaka manerana an'i Etazonia ary ivontoerana data any ivelany any Amsterdam, ny TMD Hosting dia omena miaraka amin'ny Choice an'ny PC Editor.
Manolotra drafitra fampiantranoana samihafa ny TMD Hosting, ao anatin'izany ny mpizara, mpividy, VPS, rahona, nitantana WordPress ary serivisy fampiantranoana manokana.
Famintinana ny famintinana
Tsy tonga lafatra ny TMDHosting fa manoro hevitra ny TMD Hosting aho ho an'ny bilaogera na orinasa lehibe antonony mila vahaolana azo itokisana amin'ny fampiantranoana. Tsy vitan'ny hoe manolotra fampisehoana maharitra sy tonony mahasoa izy ireo, fa manana ny sasany amin'ireo ekipa mpanohana ny mpanjifa tsara indrindra ao amin'ny orinasa koa izy ireo.
Raha mandinika ny drafitry ny fampiantranoana iombonana ianao dia manoro hevitra anao aho mba handehanana amin'ny tetikasa Business Plan satria ny fandaniana maharitra dia mitovy na kely izany ($ 8.95 / mo vs $ 9.95 / mo) fa ianao dia ho tsara kokoa ny fahombiazan'ny serivisy sy ny fahafaha-manao
Fantaro bebe kokoa ao amin'ny famerenako Hosting TMD
Newbies, mpitoraka bilaogy manokana, varotra madinika sy salantsalany, freelancer, orinasam-bola tsy mitady tombony, mpamorona tranonkala ary forum goavambe.
LA-based hosted WordPress hosting, established in 2013. .
starterDouble: $ 30 / mo
Key endri-javatra: Free SSL certificat, automatique isan'andro fiarovana, kafe plugin fotsy fotsy, tolotra maro mpampiasa, fanohanana maro.
Safidin'ny toerana misy ny servisy 15 manerana izao tontolo izao.
Mpifindra monina maimaim-poana ho an'ny mpampiasa voalohany.
Repoblika tsara - mpankafy mpankafy sy fanantenana tsara na aiza na aiza.
Fanamafisana tanteraka ny fahalalana.
Fampahafantarana ho an'ny mpizahatany mamokatra amin'ny alàlan'ny auto backups.
Sarotra ho an'ny mpampiasa manana tranokala maromaro ambany.
Tsy manohana ny fampiantranoana mailaka.
Tsidiho ny Kinsta
Mark Gavalda, PDG sy mpanorina an'i Kinsta, dia nametraka ny orinasa niverina tao 2013 tany Los Angeles, CA. Na dia mbola vao haingana aza izy ireo, dia efa nihamatotra haingana niaraka tamin'ireo birao tany Londres sy Budapest.
Ny fifandraisany amin'ny mpandrindra WordPress vetaveta, dia mifantoka amin'ny famoahana tolotra voatendry ho an'ny mpampiasa rehetra ho an'ny mpampiasa rehetra i Kinsta, na orinasa lehibe na orinasa madinika.
Iray amin'ireo anarana ambony indrindra amin'ny fampiantranoana WordPress ho fampiantranoana, Kinsta dia nahazo fahombiazana sy fanekena goavana hatramin'ny nanombohan'ny orinasa ny diany tao 2013.
Ny tena zava-dehibe nataon'i Kinsta, raha oharina amin'ireo mpilalao hafa mitovy amin'ny tontolon'ny fampiantranoana WordPress, dia ny fahafahany manome tolotra fanamafisam-peo haingam-pandeha, super innovative sy slick. Izany, miaraka amin'ny teknolojian'ny serasera (NGINX, PHP7, HHVM) sy ny fahombiazan'ny serivera dia mahatonga azy ireo ho safidy lehibe ho an'ny orinasa sy ny olon-tsotra.
Nankany amin'ny marenina maromaro manerantany izy ireo, toy ny Ricoh, Ubisoft, General Electric, ary ASOS.
Vakio eto ny famerenana feno Kinsta eto
Mpanamboatra WordPress, masoivohon'ny tranonkala sy marketing, ary mpampiasa WordPress mandroso.
Niorina tamin'ny 2007, izay manana an'i Exabytes manontolo ao Azia Atsimo Atsinanana.
Blogger WP: $ 3 / mo
Zava-dehibe WP: $ 17 / mo
Key endri-javatra: Domaine .blog maimaim-poana, proxy HTTP / s & NGINX, fanamarinana SSL maimaim-poana, lohahevitra WP 100 + maimaim-poana, tafiditra ao amin'ny Jetpack Personal / Professional.
Ny loha ambony indrindra dia nitarika ny fampiantranoana WP amin'ny vidiny sarobidy.
Ampiantrano mpivarotra WordPress amin'ny mailaka fampiantranoana.
Newbies-mpampiasa interface interface.
HTTP / s, tranokala natsangana, server NGINX.
Valiny mifangaro amin'ny fitsapana hafaingan'ny mpizara Jason.
Vidim-pivoarana sarobidy (vidin'ny 40%).
Tsy misy 24 × 7 mivantana na adiresy an-telefaona.
Tsidiho ny WPWebHost
Ny orinasan-tseraseran'ny Exabytes, avy any Azia Atsimo-Atsinanana, dia nanomboka ny diany tao amin'ny 2007 ny WPWebHost ary mikendry ny hampiasa ireo fitaovana mifandraika amin'ny serasera sy vahaolana momba ny teknolojia amin'ny tranokalan'ny WordPress.
Manana foibe roa izy ireo amin'izao fotoana izao any Denver, Co, ary any Singapore mba hanomezana haingana ny hafainganam-pandehany any Etazonia sy Azia Pasifika.
WPWebHost dia iray amin'ireo orinasa mpampiantrano fampiantranoana ao Azia Atsimoatsinanana ary raha mbola niasa izy ireo nanomboka tamin'ny 2007, dia manohy manome ny vidiny mahasalama sy mifanentana amin'ny fampiantranoana ny WordPress Hosting izy ireo.
Ny vidiny sarobidy be indrindra dia mahatonga an'i WPWebHost ho mendrika hodinihina ho an'ireo vao teraka izay maniry ny fampiantranoana WordPress mora vidy nefa manana tetibola kely kokoa.
Na dia izany aza, ny haavon'ny fandraisan'anjaran'ny mpizara servisy sy ny tsy fisian'ny mpanjifa dia tena tsy fahampiana izay mety hoeritreretinao alohan'ny hisoratra anarana.
Vakio tanteraka ny WP Web Host
Tranonkala WordPress kely sy antonony, orinasa kely ary manomboka.
Lohateny ao Lansing, Michigan Etazonia; miorina amin'ny 1997.
Key endri-javatra: Fiarovana DDoS fototra misy, fiarovana, fanatsarana ny orinasa fampiantranoana raha ilaina, serivisy serivisy tsara.
Fiarovana Firewall + DDoS miaraka amin'ny drafitra rehetra.
HIPAA-tsena sy fampiantranoana mpizara lalao.
Toerana fahalalana lehibe ho an'ny fanampiana DIY.
Garantiana fanoloana Hardware.
Vidy lafo ho an'ireo mpampiasa manana tranokala ambany be.
Ny tsy fisian'ny safidin'ny mpizara any Azia.
Misy endriny manan-danja sasany (ohatra GeoTarget, Multisite) dia tsy tafiditra ary lafo ny manampy.
Taratasy sy fanampiana an-telefaonina tsy misy an'ny Startup Plan.
Tsidiho ny LiquidWeb
Niorina tao 1997 nataon'i Matthew Hill, ny orinasa miorina amin'ny Lansing, Michigan dia manome serivisy fampiantranoana tranonkala izay manome hery ireo matihanina tranonkala manerana izao tontolo izao.
Ny orinasa dia manana orinasa manana tahiry dimy. Miaraka amin'ny mpanjifa 32,000 mihoatra ny firenena 130, LiquidWeb dia tsy maintsy miantoka fa manana ny fahefana hanome vahaolana maro izay nahatonga azy ho $ 90 tapitrisa ny orinasa amin'ny mpiasan'ny 600.
Nahazo ny LiquidWeb INC.5000 Averina haingana ny fampiroboroboana ho an'ny 9 taona manaraka (2007- 2015).
Ny LiquidWeb dia amidy amin'ny orinasam-bolan'ny Madison Dearborn Partner ao 2015.
LiquidWeb dia tsara amin'ny lafiny maro saingy mety tsy ho an'ny rehetra, indrindra indrindra raha toa ny vidin'ny fidirana amin'ny drafitra WordPress tantanany.
Izy ireo dia orinasa mpampiantrano ho an'ny marika iraisam-pirenena fanta-daza, anisan'izany ny Ducati, Hitachi, Red Bull, MTV, FedEx, Home Depot, ary koa ny Chevy Volt.
Ny mpampiantrano tranonkala dia manana serivisy fampiantranoana be dia be ny orinasa fampiantranoana, firaketana an-tsokosoko matanjaka, ary fampisehoana fampiantranoana tsara - izay mahatonga azy ireo ho safidy tsara amin'ny fiaraha-miasa sy mpampiasa mpampiantrano orinasa.
Vakio manontolo ny famerenan'ny LiquidWeb avy amin'i Timthothy Shim
Aterineto fampandrosoana sy ny marketing, mpampiasa orinasa mpampiantrano orinasa, tranonkala orinasa lehibe, mpamokatra lalao an-tserasera, e-commerce, fivarotana an-tserasera.
Mampiasà tranga voafantina tsara indrindra amin'ny fampiantranoana
Manaraka, aleo ampitahaina ireo tranga fampiasa isan-karazany amin'ireto orinasa mpampiantrano laza ambony ireto.
1. Tsara indrindra ho an'ny karazany fampiantranoana samihafa
Hosting tsara indrindra amin'ny ambaratonga samihafa: Interserver, SiteGround, TMD Hosting
Tsy ny orinasa mpampiantrano tranonkala rehetra no miatrika ny tsena mitovy. Ny tranokala web sasany dia mifantoka amin'ny faritra manokana, fa ny hafa kosa dia mety mitondra vokatra marobe. Ny fisafidianana ny mety dia miankina amin'ny anao fotsiny fa tsy ny filanao amin'izao fotoana izao, fa ny fiheverana ny scalability koa maharitra.
Host Web tsara indrindra
Soso-kevitra: Ahoana ny fiantraikan'ny tranonkala fampiantranoana amin'ny safidinao?
Ohatra - mpampiantrano tranonkala samihafa amin'ny InMotion Hosting
GreenGeeks, InterServer, ary TMD Hosting irery no telo mandray ireo mpivarotra tolotra - ampitahao ny fanenjehany sy ny fahasalamany eto.
A2 Hosting, InMotion Hosting, InterServer, ary TMD Hosting dia safidy tsara ho an'ireo te-hanomboka kely (ambany $ 5 / mo) ary manavao rehefa afaka izany.
Kinsta dia tranga iray manokana an'ny mpampiantrano izay manampahaizana manokana ao amin'ny Managing WordPress Cloud irery. Midika izany fa na dia voafetra ihany aza ny karazana fampiharana fampiharana dia afaka mikajy ihany koa izy amin'ny filàna. WP Engine dia anarana malaza iray hafa ao anatin'io faritra mitovitovy io (saingy tsy nanao izany tamin'ny lisitry ny lisitray), azonao atao ampitahao ny andaniny roa amin'ny lafiny fampiasana ity fitaovana ity.
2. Tsara indrindra ho an'ny tompona tranonkala marobe
Tsara indrindra amin'ny fampiantranoana tranonkala marobe: A2 Hosting, InterServer, Hostinger
Raha momba ny fampiantranoana tranonkala mizara, ianao dia voafetra matetika amin'ny isan'ny tranonkala afaka entinao isaky ny kaonty miankina amin'ny drafitra. Ny kaonty fampiantranoana VPS dia tsy misy fetrany amin'ny sehatra saingy nosarahina amin'ny habetsaky ny loharanon'ireo drafitra tsirairay.
Nizara tranonkala Web
Website 1 Host
Host web 2-10 tranonkala
tsy voafetra Websites
Fanamarihana - Kinsta sy ny LiquidWeb dia tsy manolotra serivisy fampiantranoana nizara.
Fanamarihana - ireo karazana drafitra fampiantranoana VPS (eo ho eo): haavon'ny fidirana - 4 GB RAM, fitahirizana 75 GB; Antony Mid - 6 GB RAM, fitahirizana 150 GB; Advanced - 8 GB RAM, fitahirizana 250 GB. Ny InterServer dia manana ny fananganana mpizara mora indrindra amin'ny alàlan'izy ireo / mitantana ny foiben-dry zareo ary manolotra vahaolana fampiantranoana fanangonana.
3. Ny fampiantranoana haingana indrindra / ny haingam-pandeha haingana indrindra
Fampisehoana an-tranonkala tsara indrindra: InMotion Hosting, InterServer, Kinsta
Misy endri-javatra maro samihafa izay azon'ny mpampiantrano tranonkala manampy ny fanatanterahana ny tranonkalanao. Zavatra maro no misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny tranokalanao ary ny fahafantaranao ny fisian'ireo endri-javatra ireo dia afaka manampy anao hanao safidy tsara kokoa.
Rehefa faran'ny andro dia mifantoka amin'ny hafainganam-pandehan'ny mpizara, satria io no antony voafetranao voafetra.
Ny hafainganana ny hafainganan'ny valin-kafatra ho an'ny Interserver tamin'ny Janoary 2020 dia 114.62ms (loharano). Nomena marika ho mpampiantrano tranonkala ambony amin'ny modely fanodidin'ny HostScore izahay tamin'io volana io.
Kinsta fampiantranoana ny valin'ny fandraisan'anjara dia voamarina ao amin'ny HostScore.net (loharano) isaky ny adiny efatra avy amin'ny toerana folo. Amin'ity vanim-potoana anoratana ity dia mijanona eo ambanin'ny 250ms (izay tena tsara) mandritra ny andro 30 ny ora famaliana (afa-tsy amin'i Bangalore).
Ampitahao ny endri-javatra "haingam-pandeha"
Ny hafainganana ny mpizara (Fitsapana nataontsika)
InMotion Hosting Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra VPS na ambony kokoa US fotsiny ~ 350 ms
InterServer Ny drafitra rehetra Drafitra inVPS ihany no ambony kokoa VPS na ambony kokoa US fotsiny ~ 250 ms
SiteGround Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Ao amin'ny GrowBig ihany no ambony kokoa Global ~ 600 ms
GreenGeeks Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Global ~ 400 ms
Hostinger Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Global ~ 500 ms
A2 Hosting Ny drafitra rehetra Turbo (mizara fampiantranoana) na ambony kokoa Global ~ 500 ms
TMD Hosting Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Global ~ 500 ms
Kinsta Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Global ~ 200 ms
WP Web Host Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Etazonia & Azia ~ 700 ms
LiquidWeb Ny drafitra rehetra Ao amin'ny fampiantranoana WP fampiantranoana Eny nefa mila fanitsiana torolàlana Etazonia & EU ~ 450 ms
4. Fanomezam-bidy tsara indrindra ho an'ny mpampivelatra
Fanomezam-bidy tsara indrindra ho an'ny mpivoatra: A2 Hosting, InterServer, SiteGround
Raha mpamorona ianao ary mila tontolo fampandrosoana fampandrosoana manokana hanapariahana sy fitsapana ireo andian-dahatsoratra fampiharana, dia mila mifantoka akaiky ianao. Ity misy fomba ahafahanao mampiantrano ny tranokala Django, Node.js, Python, na Windows (ASP.net) miaraka amin'ireo mpizara 10 mpizara izay nofidiko.
InMotion Hosting VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa
InterServer Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra
SiteGround VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa
GreenGeeks VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa
Hostinger VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa
A2 Hosting Swift (mizara) na ambony kokoa Swift (mizara) na ambony kokoa Ny drafitra rehetra Ny drafitra rehetra
TMD Hosting VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa
LiquidWeb VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa VPS na ambony kokoa
Soso-kevitra: Te hanana tontolo fampandrosoana fampandrosoana manokana ve ianao amin'ny fampiantranoana iraisana?
Ny fampiantranoana Node.js dia manomboka amin'ny $ 3.70 / mo amin'ny A2 Hosting ihany.
Ny ankamaroan'ny mpampiantrano tranonkala dia tsy manolotra betsaka amin'ny fomba fampivoarana ho an'ny kaonty fampiantranoana nizara. A2 Hosting sy Interserver no tsy fahita firy izay tsy fahita firy. Ho an'ireo izay mijery ny fampiantranoana VPS, ny ankamaroan'ny tontolo iainana azo haverina.
Tsindrio eto raha hitsidika A2 Hosting / Tsindrio eto raha hitsidika Interserver.
5. Tsara indrindra ho an'ny orinasan-tsindry
Fanomezam-bidy tsara indrindra ho an'ny orinasa kely: A2 Hosting, InMotion Hosting, SiteGround
Ireo tranonkala izay mifototra amin'ny orinasa na manao asa aman-draharaha an-tserasera dia hanana filàna manokana koa. Tafiditra ao ireo fepetra takian'ny fiarovana sy ny fampiharana hanohanana ny orinasa. Ahitana ny fampiharana web eCommerce malaza Magento, PrestaShop, ary WooCommerce.
Ny ankamaroan'ny mpampiantrano tranonkala tsara dia hanolotra karazana SSL maimaim-poana (AutoSSL ho an'ny cPanel, Andao Hamboarina ho an'ny Plesk) fa tsy manao izany amin'ny tranga manokana, mety hisy safidy hafa mahery vaika kokoa - ny fahazoan-dàlana Ndao Encrypt Wildcard.
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio ny torolàlana momba ny fampiantranoana kely.
Fampidirana SSL mora
InMotion Hosting AutoSSL $ 48 / taona
InterServer AutoSSL $ 36 / taona
SiteGround Andao atao Encrypt Wildcard $ 54 / taona
GreenGeeks Andao atao Encrypt Wildcard $ 48 / taona
Hostinger Andao isika hamehy *
A2 Hosting Andao isika hamehy $ 48 / taona
TMD Hosting Andao isika hamehy $ 48 / taona
Kinsta Andao atao Encrypt Wildcard
WP Web Host Andao isika hamehy
LiquidWeb Andao isika hamehy **
Fanamarihana * Hostinger dia manolotra adiresy IP tokana maimaimpoana ho an'ny mpampiasa rehetra VPS fampiantranoana. Ny adiresy IP natokana dia tsy tohanana amin'ny serivisy fampiantranoana mizara.
Fanamarihana ** LiquidWeb dia manolotra adiresy IP natokana ho an'ny maimaim-poana. Ny adiresy IP natokana ho an'ny manaraka dia mitentina $ 84 / taona.
6. tsara indrindra ho an'ny mpampiasa WordPress Advanced
Hosting WordPress tsara indrindra ho an'ny mpampiasa maoderina: Kinsta, SiteGround
Maro ny ambaratonga mpampiasa WordPress, nanomboka tamin'ny amateurs voalohany ho an'ireo izay manam-pahaizana manokana ka afaka mametraka ny andraikiny WordPress. Ny fahafantarana izany, ny tranonkala mpampiantrano ihany koa dia manolotra karazana drafitra sy endri-javatra voafaritry ny WordPress toy ny plugin optimizer. Ny drafitra WordPress mitantana dia safidy tsara ho an'ireo mitady tanana mitari-dalana. Misy vitsivitsy mpampiantrano dia manana manam-pahaizana WordPress ihany koa ho mpiasa mpanohana.
Fanohanana WP Expert
Fampisehoana manokana momba ny WordPress
InMotion Hosting BoldGrid - Mpanorina tranonkala WordPress
SiteGround Staging, WP-CLI, SG Optimizer - plugin manokana amin'ny fampisehoana tsara indrindra
GreenGeeks WP-CLI, PowerCacher - plugin manokana ho an'ny fampisehoana tsara indrindra
A2 Hosting Staging, WP-CLI, A2 Optimized - plugin manokana amin'ny fampisehoana tsara indrindra
Kinsta Fandaharana, WP-CLI, Dashboard manokana, loharanon-karena WP feno
WP Web Host Drafitra drafitra samirery / matihanina Jetpack
Soso-kevitra: Tena mila mpampiantrano WordPress ve ianao?
Nandritra ny fikarohanao dia mety hahita drafitra fampiantranoana WordPress maro (WP) be dia be ianao ary mahita fa amin'ny toe-javatra sasany, somary avo kokoa ny vidin'ireo fampiantranoana WP ireo (miakatra ho any 30x pricier) noho ny fampiantranoana iraisana.
Ny fahasamihafan'ny vidiny lehibe indrindra dia noho ny fiasa maro mifantoka amin'ny WP, ao anatin'izany ny mekanika caching manokana, ny sehatra WP developer, ary ny WP manam-pahaizana manohana. Ireo fiasa ireo dia mety ho ilaina ho an'ny mpampiasa miasa amin'ny tranokala WP avo lenta, sampana fampandrosoana / marketing, na orinasa antonony. Mpanomboka sy bilaogera vaovao, na izany aza, tsy dia mila ny maro amin'ireo fampisehoana efa natolotra.
Fantaro bebe kokoa momba ny fampiantranoana WordPress mitantana amin'ity lahatsoratra ity.
7. Ny fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny mpanoratra / mpanoratra
Hosting Web tsara indrindra ho an'ireo mpanoratra: GreenGeeks, Hostinger, TMD Hosting
Ohatra - ny fampiantranoana nizara Hostinger dia nanomboka tamin'ny $ 0.80 / mo - tonga lafatra ho an'ny freelancer izay mila tranonkala tsotra.
Ho an'ny mpanoratra dia ny laharam-pahamehana no mifidy ny mpampiantrano tranonkala izay mitahiry fotoana. Mpanamboatra tranonkala mora ampiasaina (hametraka sy hihazonana toerana haingana), tranokala (hifandraisana amin'ny mpanjifa sy mpamoaka boky), ary vidiny mora vidy (ny asa soratanao no fanoratanao) no fepetra lehibe telo ataonao.
Mpanorina tranonkala tsotra
^ Fanamarihana - vidin'ny fisoratana anarana amin'ny fampiantranoana tranonkala tokana.
8. Serivisy mampiantrano fanombohana sy namana
Hosting Web tsara indrindra ho an'ireo mpanoratra: GreenGeeks, InMotion Hosting
Dashboard GreenGeeks - sariaka ny mpampiasa ary mora manatratra ny fanampiana.
Ho an'ireo vao manomboka, ny mifidy tranonkala web dia mora vidy ary mora manomboka amin'ny tena manakiana be. Ny fampidirana ny kaonty eo no eo no eo, ny takelaka fanaraha-maso mora, ary ny fanohanana tsara izay vonona hanampy hatrany dia takiana lehibe telo.
Ho an'ireo vao manomboka vao manomboka - InMotion Hosting sy GreenGeeks dia tonga miaraka amina panel control mora foana (cPanel) ary fanohanana tsara amin'ny vidiny mora.
Ny rindrambaiko mpampiasa GreenGeeks vaovao namboarina dia manjary zavatra tsara ho an'ireo vao manomboka amin'ny fomba maro. Ny fametrahana SSL maimaim-poana, ohatra, dia mora be tokoa amin'ny lampihazo. Amin'ny lafiny iray, ny fotoam-pitsapana "Vola vola miverina" dia miakatra hatrany amin'ny 90 andro ao amin'ny InMotion - izay mahatonga azy ireo hisafidy safidy tsy misy atahorana ho an'ny mpivady vaovao.
InMotion Hosting $ 3.99 / mo 90 andro cPanel
InterServer $ 4.00 / mo 30 andro cPanel
SiteGround $ 6.99 / mo 30 andro In-trano
GreenGeeks $ 2.95 / mo 30 andro cPanel
Hostinger $ 0.80 / mo 30 andro In-trano
A2 Hosting $ 3.92 / mo 30 andro cPanel
TMD Hosting $ 2.95 / mo 60 andro cPanel
Kinsta $ 29.00 / mo 30 andro In-trano
WP Web Host $ 3.00 / mo 100 andro Plesk
LiquidWeb $ 25.00 / mo 30 andro Plesk
^ Fanamarihana - vidin'ny fisoratana anarana amin'ny fampiantranoana tranonkala tokana amin'ny tontolo iraisana.
9. Famolavola maharitra, vahaolana mahomby
Tsara indrindra ho an'ny fotoana maharitra: A2 Hosting, InterServer
Ohatra - Tsy manandrana ny vidin'izy ireo mandritra ny fanavaozana ny InterServer.
Fantatry ny tompona tranonkala fa ny fampiasam-bola voalohany dia ampahany amin'ny vidiny tanteraka. Izany dia vokatry ny toe-javatra maro samihafa toy ny vidin'ny fampiantranoana. Ny ankamaroan'ny mpanome tolotra tranonkala dia manolotra fihenam-bidy matevina izay sarotra sakanana. Na izany aza, miakatra ny vidin-javatra rehefa tonga ny fotoana hanavaozana ny drafitra. Rehefa manisa ny mety ho vidin'ny mpampiantrano tranonkala iray ianao dia tadidio ao anatin'ny drafitrao.
InMotion Hosting $ 3.99 / mo $ 9.99 / mo Andro fitsarana 90 maimaimpoana
InterServer $ 4.00 / mo $ 4.00 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
SiteGround $ 6.99 / mo $ 14.99 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
GreenGeeks $ 5.95 / mo $ 14.95 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
Hostinger $ 2.15 / mo $ 11.95 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
A2 Hosting $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo Na inona na inona vola miverina
TMD Hosting $ 4.95 / mo $ 7.95 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
Kinsta $ 60.00 / mo $ 60.00 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
WP Web Host $ 27.00 / mo $ 27.00 / mo Andro fitsarana 100 maimaimpoana
LiquidWeb $ 29.00 / mo $ 29.00 / mo Andro fitsarana 30 maimaimpoana
^ Fanamarihana - Vidy mifototra amin'ny vanim-potoana famandrihana 2-taona.
Soso-kevitra: Inona ny vidiny mety karama?
Betsaka ny karazana serivisy fampiantranoana, samy manana ny vidiny samy hafa sy manolotra endriny sy safidy samihafa. Ianao dia tsy mila mahita afa-tsy ny isa tsara indrindra sy ny vidiny, fa misafidy ihany koa izay mifanaraka amin'ny filan'ny tranonkalanao.
Ny ekipako dia nijery ny fifanarahana fampiantranoana 400 ary navoaka ity torolàlana amin'ny vidin'ny fampiantranoana ity vao haingana. Amin'ny ankapobeny, manantena handoa $ 3 - $ 10 isam-bolana ho an'ny fampiantranoana azo itokisana, $ 30 - $ 55 isam-bolana ho an'ny fampiantranoana VPS antonony.
10. Tsara indrindra ho an'ny tranokala manokana
Hosting amin'ny tranonkala manokana tsara indrindra: GreenGeeks, Hostinger, TMD Hosting
Tahaka ny fampiantranoana ny mpanoratra, ny tranokala fampiantranoana manokana dia tokony ho azo lafo sy mora ampiasaina. Na inona na inona raha mamoaka ny CV anao na mampiroborobo ny «marika manokana» - Ny mpanamboatra tranokala mora ampiasaina sy ny endri-tranonkala namboarina ary ny vidiny lafo dia tena ilaina ao amin'ny tranokalan'ny tranokala manokana.
Ho an'ireo manisy tranonkala iray tokana dia manome vahaolana mora vidy ($ 0.80 / mo amin'ny fisoratana anarana) i Hostinger. Ny TMD Hosting sy GreenGeeks dia manolotra zavatra sarobidy kokoa saingy manolotra tranokala tsy voafetra izy ireo ary manome fanohanana ny mpanjifa tsara.
11. tsara indrindra ho an'ny tranokalan'ny UK
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa UK: Kinsta, SiteGround
Mba hahalalanao izay mahatonga ny mpampiantrano tranonkala ho tsara indrindra amin'ny toerana iray manokana dia mila miadi-hevitra momba izany isika latency.
Inona no atao hoe fahakiviana?
Ny faharanana dia ny fe-potoana handraisan'ny mpizara sy fizarana ny fangatahana nataon'ny mpampiasa.
Hevero ho toy ny sidina izany - Rehefa misy tranonkala anglisy iray miditra amin'ny tranokala iray mipetraka any Aostralia, ny fangatahany dia manidina avy any Angletera - Moyen Orient - Azia - Australia - Azia - Moyen Orient - Angletera hiverina. Ny fotoana sidina dia ny fahalalahan'ny tranonkala.
Raha atokana any Angletera ny tranokala manokana dia mikoriana ao Angletera fotsiny ny fangatahana, manamaivana ny fotoana fitsangatsanganana.
Raha jerena ny zava-mitranga amin'ny tena fiainana, ohatra.
Taona maro lasa izay ity tranonkala novakianao ity dia nampiantrano tamina ivontoerana data iray any Etazonia. Ity ambany ity no hizahana ny hafainganam-pandehan'ny tranokala amin'ny toerana 10 mampiasa Bitcatcha.
Valin'ny fitsapana amin'ny hafainganam-pandeha (2018) avy amin'ny toerana 10.
Avy amin'ny fakantsary, dia hitanao fa ny fotoana ny valin'ny mpizara dia samihafa amin'ny toerana mankany amin'ny toerana. Nahazo entana haingana (8ms) ilay tranokala ho an'ny node test any Etazonia ary dia mihena ny halavan'ny fitsapana any Japana sy Australia (367ms ary 414 ms).
Ny manakaiky ny toerana misy ny mpihaino anao dia ny mpizara, ny ambany indrindra izany.
Ny fahitana dia ampahany iray amin'ny fotoana lanin'ny tranonkalanao. Amin'ny fanatsarana ny elanelam-potoana (misafidy ny hampiantrano akaiky ny mpihaino anao) dia hihatsara ny fahalalahan'ny tranokalano.
Raha atao amin'ny teny hafa, raha any amin'ny firenena na faritra iray ny ankamaroan'ny mpihaino anao dia tsara kokoa ny mampiantrano ny tranonkalanao akaiky azy ireo.
Izany dia manazava ny antony maha-antom-pisainana azy manan-danja rehefa misafidy ny mpampiantrano tranonkala ianao.
Ka iza no mpampiantrano fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny tranokala UK?
Ny mpikambana ao amin'ny ekipako dia nanao famakafakana tampoka tamin'ny orinasam-pifandraisana mpizara maromaro manana foibe data izay any UK ary mametraka azy ireo miankina amin'ny vidiny sy ny endri-javatra ary ny fahalalàna. Miorina amin'ny valin'ny fitsapana azy, SiteGround - miaraka amin'ny toerana misy mpizara monina any London, dia isan'ireo mpampiantrano manana hafaingam-pandeha ambony indrindra. Kinsta, etsy ankilany, dia mihazakazaka mankany amin'ireo mpizara atolotry ny Google Cloud ao London (izay efa voaporofo tsara ny kalitao hafainganam-pandeha).
(avy any UK)
Internet Internet Leeds 37 ms 126 ms
Mpampiantrano haingana Gloucester 59 ms 109 ms
12. tsara indrindra ho an'ny tranokala Maleziana sy Singaporeana
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Maleziana sy Singaporeana: Hostinger, SiteGround , TMD Hosting
Ny hahafantarana izay mahatonga ireo serivisy fampiantranoana ireo ho an'ny tranokala Maleziana sy Singaporeana, azafady mba vakio ny fanazavako amin'ny latency.
Fitsapana hafainganam-pandeha notarihan'ny mpikambana ao amin'ny ekipako Abrar Mohi Shfee.
(avy any Singapour)
Hostinger Malezia 8 ms 191 ms S $ 1.00 / mo
Shinjiru Malezia 24 ms 119 ms S $ 5.00 / mo
Fanontaniana marobe momba ny Hosting Services
Nohazavaiko ny fototry ny fampiantranoana tranonkala iray ity lahatsoratra ity fa raha sendra mitady valiny haingana ianao…
Inona ny fampiantranoana tranonkala?
Ny fampiantranoana tranonkala dia serivisy manome tolotra toa ny toerana fitahirizana sy ny fotodrafitrasa tambajotra ho an'ny mpampiasa azy.
Misimisy kokoa momba ny fomba fiasan'ny fampiantranoana tranonkala eto.
Adiresy domain no adiresin'ny mailaka iray ataon'ny olona iray. Soratana ao anaty biraon'ny Internet browser izy io, azon'ny mpitsidika hidirana tranonkala.
Misimisy kokoa momba ny fomba fiasan'ny domain nameg eto.
Inona avy ireo karazana serivisy fampiantranoana tranonkala?
Ny karazana fototry ny fampiantranoana tranonkala dia mizara, mpizara VPS / Cloud ary mpizara voatokana. Ny fahasamihafana lehibe dia eo amin'ny fampisehoana, ny fiarovana ary ny fahatokisana.
Jereo eto ny karazany amin'ny tranonkala fampiantranoana eto.
Inona no maha samihafa ny fampiantranoana tranonkala sy ny anaran'ny domain?
Manome toerana ho anao tranonkala iray ny anarana domain, raha ny fampiantranoana tranonkala dia serivisy izay mitantana ny fomba atolotra ny mpitsidika.
Aiza no hanofa mpampiantrano tranonkala?
Misy an'arivony ny mpamatsy tranonkala fampiantranoana an'arivony manerana ny Internet; isika nijery bebe kokoa ny 60 amin'izy ireo amin'ity tranokala ity.
Afaka mividy sy hanana ny mpampiantrano tranonkala manokana ve aho?
Eny. Betsaka ny orinasa lehibe kokoa mividy, mampiantrano ary mitazona ny serizany (s) azy manokana ao amin'ny foibe data ho an'ny fampiasana azy manokana.
Misimisy kokoa momba ny fampiantranoana ny tranokalanao eto an-toerana eto.
Betsaka ny orinasa mpampiantrano tranonkala lehibe kokoa no hanolotra inona?
Ireo orinasa mpampiantrano tranonkala lehibe kokoa dia mazàna hanolotra serivisy serivisy tranonkala misy serivisy. Tafiditra ao ireo drafitra fampiantranoana tranonkala, ny fivarotana anarana anarana sy ny planin'ny mpivarotra.
Inona no atao hoe mpivarotra fampiantranoana tranonkala?
Ny olona sasany dia hividy amin'ny fampiantranoana an-tsokosoko an-tsokosoko ary hizarazara ireo loharanon-trano hofaina. Izany no antsoina hoe fampiantranoana mpividy.
Manao ahoana ny mpizara?
Misy karazana mpizara roa - kilasim-bola sy mpanjifa. Ny mpizara sokajy mpanjifa dia toa ny boaty PC desktop mahazatra nefa ny mpizara varotra dia toa boaty lehibe misy rakitra ao amin'izy ireo.
Inona no ilaiko ny hampiantrano ny tranokalako manokana?
Mba hampiantrano tranonkala iray, dia mila anarana anarana sy fampiantranoana tranonkala ianao. Ny anaran'ny sehatra dia adiresy izay manondro ny toerana itahirizanao ny rakitra tranonkalanao.
Inona ny tranokala?
Ireo tranonkala dia famoriam-pejy tranonkala manolotra soratra, horonan-tsary ary sary miaraka amin'ireo mpitsidika. Ny tranokala tsirairay dia mazàna manana pejy marobe izay napetraka eo ambanin'ny anarana tokana.
Ho an'ity lahatsoratra ity ihany. Raha mbola tsy mahafa-po ianao, vakio:
Ny vidin'ny fivoaran'ny tranonkala miasa
Ohatrinona ny vola laninao amin'ny fampiantranoana tranonkala
Ahoana no fomba hamoronana tranonkala iray avy amin'ny scratch
Ahoana no handefasana ny tranokalanao any amin'ny tranonkala hafa?
P / S: Ireo rohy manondro ireo orinasa mpampiantrano orinasa dia rohy mifandray - raha toa ianao ka misoratra amin'ny serivisy fampiantranoana amin'ny alàlan'ireto rohy ireto dia homena vola aho ho mpandika teny sy mitady vola. Izao no fomba itahirizako ny fahavelomana ity tranokala ity (sehatra, mpizara, fitiliam-bola, sns) ary handoa ny karaman'ny mpikambana ao amin'ny ekipako. Ny fividianana amin'ny alàlan'ny rohy mifandray amiko dia tsy andoavanao vola bebe kokoa - azafady manohana anay raha mahita fa mahasoa ny tranokalanay fampiantranoana.
P / P / S: Mitaky ezaka be ny manangona sy hanangona ary hanavao ireo data ireo (nasiana farany ny Janoary 2020). Ampahafantaro ahy azafady raha mahita lesoka na fampahalalana efa lany andro eo amin'ireo latabatra manaraka ireto.
InMotion - manomboka $ 2.49 / mo (baiko)
Interserver - manomboka $ 4 / mo (baiko)
SiteGround - manomboka $ 6.99 / mo (baiko)
GreenGeeks - manomboka $ 2.95 / mo (baiko)
Hostinger - manomboka $ 0.90 / mo (baiko)
A2 Hosting - manomboka $ 3.92 / mo (baiko)
TMD Hosting - manomboka $ 2.95 / mo (baiko)
Kinsta - manomboka $ 30 / mo (baiko)
WP Web Host - manomboka $ 3 / mo (baiko)
LiquidWeb - manomboka $ 29 / mo (baiko)
Ny fampiasana-tranga / tranga tsara indrindra fampiantranoana tsara indrindra
Tsara indrindra ho an'ny sehatra fampiantranoana samihafa
Tsara indrindra ho an'ny tranokala marobe
Ny haingam-pandeha tsara indrindra
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny mpamorona tranonkala
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny eCommerce
Tsara indrindra ho an'ny mpampiasa WP mandroso
Fampiantranoana tsara ho an'ny mpanoratra / mpanoratra
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ireo vao manomboka
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa maharitra
Fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny tranokala manokana
Ny fampiantranoana anglisy tsara indrindra
Fampiantranoana tsara indrindra Malaysia / Singapore
* Fampisehoana momba ny fahazoana: mahazo ny saram-pitaterana referisy amin'ny orinasa mpampiantrano voatonona ao amin'ity lahatsoratra ity ny WHSR.
Web Hosting tsy voafetra: tena izy ve?
Ny Blaogin'ny mpanoratra? Ny zavatra 8 dia azonao atao amin'ny blôgy momba ny tranonkalanao
Manorata ny valopyo: Ny freebies tsara indrindra amin'ny famokarana mpitarika